Mujaho wemabhiza - Noti Caballos | Noti Mahosi
ari mijaho yemabhiza vanofambisa inoshamisa mari. Kunyanya kana izvi zvichipikiswa mukati iyo mijaho, nekuhwina uye kurasikirwa nemabhiza. Ose anozviremekedza bhiza mujaho fan ane bheji nguva nenguva.
Munzvimbo ino Iwe unozowana zvese zvine chekuita nenyika yepasiti yemijaho yemabhiza, kwatinogona kuziva zvirinani bhiza rega rega rinokunda, mhando dzekubheja, sei uye kupi kubheja, izvo zviyero, matipi uye zvimwe zvinhu zvekuti kana mhanza ichienda nesu inozobatsira kwazvo pakuisa mabheti.
Kune rumwe rutivi hatikwanise kukanganwa kuti mutambo umo kufamba kwemari yakawandisa kunogona kuunza matambudziko uye isu tinofanirwa kungwarira nenyaya iyi kuti tidzivise kusagadzikana kwakasiyana.
Kutsika mabhiza nemadzinza avo
kubudikidza Jenny monge inoita 3 makore .
Mamwe maequine aive nehunhu hunhu hunodaidzwa kunzi trot iyo yaifadza vazhinji vanofarira mitambo yequine uye vafudzi. This made…
Iyo Hippodrome yeLa Zarzuela uye nhoroondo yayo
Hipódromo de La Zarzuela iri kumucheto kweguta reMadrid. Yakavakirwa mumakomo ne ...
Mujaho wepasirese wemabhiza
kubudikidza Monica sanchez inoita 4 makore .
Iwe uri mumwe weavo vanofarira kuona bhiza richimhanya? Ipapo iwe ungangove mumwe wevaya vari kuona zvinhu zvisipo, uchinakidzwa ...
Iwo akanakisa emakwikwi emakwikwi munhoroondo
kubudikidza Carlos Garrido inoita 5 makore .
Mujaho wemabhiza zvirokwazvo unomhanyisa. Chitarisiko chakachena munzira dzese, icho chinosimudzira manzwiro uye chinoshanda ...
Nhandare dzine mukurumbira munyika
Iro bhiza rave pasina mubvunzo raive rimwe revatendeki vanofamba shamwari dzevanhu mukati me ...